Red Magic 5G ga-abịa ihe ruru 16 GB nke RAM | Gam akporosis
Nubia President na-akwado Red Magic 5G ga-abịa na 16GB RAM
Ni Fei bụ onye isi ndị isi Nubian; kpọmkwem, ọ bụ onye isi ala nke ndị nrụpụta China. Agwa a na-agakarị na mmekọrịta mmekọrịta Weibo, iji kpughee ihe omume nke ụlọ ọrụ ahụ na banyere ngwaahịa ndị na-abịanụ ka ewepụta.
El Red Ime Anwansi 5G Ọ bụ flagship ọzọ na-esote nke ika ahụ. Anyị na-ekwu okwu banyere ekwentị a n'ihe karịrị otu oge, na-edepụta ụfọdụ njirimara na njirimara teknụzụ ọ ga-egosi. N'oge a, iji gbakwunye na ozi ahụ anakọtara na mbụ, anyị maara nke ahụ ga-aba ahịa ahụ ruo ihe ruru 16GB RAM, nke Ni Fei kwuru n'onwe ya.
Kpọtụrụ, onye isi oche nke Nubia kwuru na a ga-enye Red Magic 5G n'ahịa ahụ ruo 16 GB nke RAM. O doro anya na a ga - enwe ụdị RAM ndị ọzọ, mana nke a bụ ihe anyị ga - akwado ma emechaa. Ihe omuma a gha aghaghi ikwu na kaadị RAM ga-abụ nke ụdị LPDDR5, nke Samsung wetara.
Nseta ihuenyo nke Nubia Red Magic na 16 GB
Weibo post, nke bụ nke anyị zigara n’elu, gụnyekwara nseta ihuenyo nke ngalaba ahụ Banyere nke ekwentị nke Nubia Red Magic 5G ma gosipụta akaụntụ Fei site n'ikwu na enwere ụdị 16GB RAM, yana ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ. Ihe onyonyo a gosikwara na ọnụ arụmọrụ dị elu nwere akara ngosi 'NX659J', na-agba RedMagic OS mbipute 3.0 nhazi nke edobere na gam akporo 10 na-onwem na Jenụwarị 2020 kwachie patch.
Nubia Red Magic 5G ga-enwe chaja 55W
The variant depụtara nwere 16GB Ram na 256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, nke enweghi ike ịgbasa dị ka oghere kaadi microSD adịghị. Ihuenyo ahụ na-egosikwa na Red Magic 5G na-arụ ọrụ na nhazi ahụ Snapdragon 865 na o nwere modem Snapdragon X55 5G.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia President na-akwado Red Magic 5G ga-abịa na 16GB RAM
Igwe ihuenyo 90Hz Super AMOLED bụ nke akwadoro maka Realme X50 Pro 5G
Launchbọchị mmalite nke ụlọ ọrụ nke Realme X50 Pro 5G kwadoro: a ga-eweta ya na Spain na India